Sheekada filimka Golmaal Again: Mada daalo kasto oo aad maanka ku heesay kama weyn doontid! | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Golmaal Again: Mada daalo kasto oo aad maanka ku heesay kama weyn doontid!
Sheekada filimka Golmaal Again: Mada daalo kasto oo aad maanka ku heesay kama weyn doontid!
Bollywood-ka waxay sameeyeen aflaan badan oo shactiro ah kuwaas oo guuleesteen ama guul dareesteen balse fanka Hindiya uma badno sameynta aflaanta cabsida iyo shactirada isku jiraan (Horror Comedy).
Filim shactiro iyo cabsi isku jiro midkiisa ugu caansan uguna weyn waa Bhool Bhulaiyaa (2007) sidoo kalena dhawaanahan Horror Comedy dadka ka heleen Super Hit noqdayna waa Grand Masti.
Sanadkii hore filimka shactirada iyo cabsida isku jiray Tutak Tutak Tutiya ayay Bollywood-ka sameeyeen laakiin shacab weynaha Hindiya oo dhan masoo dhaweynin inkastoo Koonfur Hindiya laga jeclaaday filimkaan Tamannah Bhatia, Prabhu Deva iyo Sonu Sood wada jileen.
Maanta madasha waxaa saaran Golmaal-kii shactirada badnaa sedexdiisii qeyboodna hirgaleen oo qayb afaraad laga sameeyay Golmaal Again waxaana fariintiisa shactirada lagu dhex lifaaqay cabsi taasi oo ka dhigtay inuu ku biiray liiska mashaariicda Bollywood-ka halista ku ah inay guuleesteen ee loo yaqaa Horror Comedy.
Jilaayaasha Golmaali Again: Ajay Devgn, Arshad Warsi, Parineeti Chopra, Tabu, Kunal Kemmu, Shreyas Talpade, Tusshar Kapoor, Sanjay Mishra, Johnny Lever, Mukesh Tiwari, Vrajesh Hirjee.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Golmaal Again: Shactiro aan dhamaad laheyn iyo cabsi qosol gariir ah, Johnny Lever (Amadi) wuu soo laabtay Golmaal Again shactirada ugu wacan isagaa iska leh sidoo kalena Sanjay Mishra isagana kama liito.
Muxuu Ku Liitaa Golmaal Again: 10-ka daqiiqo ee hore waa mid caajis intas dulqaado kadib 2-saac iyo 21-daqiiqo oo qosol gariir ah isku diyaari, sidoo kalena xoogaa qaybaha dambe cabsida si qasab ah ayaa loogu soo daray fariinta filimkaan.
Fariinta Filimka Golmaal Again: Golmaal Again waa sheeko ku saabsan 5-saaxiibo ah kuwaas oo booqanayaan xaruuntii ogoomada oo ay kusoo bar baareen ayagoo yar.
Gopal (Ajay Devgn), Madhav (Arshad Warsi), Lucky (Tusshar Kapoor), Laxman Prasad Apte (Shreyas Talpade) iyo Laxman Sharma (Kunal Kemmu) waa agooman ama agoomiin kusoo bar baareen xarunta agoomada oo uu iska leeyahay Jamnadas (Uday Tikekar).
5-tii caruurta ahaa markii ay yaraayeen saaxiibo is jecel ayay ahaayeen laakiin marka ay weynaadeen nolosha ayaa kala fogeeneyso waxaana isla nool isna jecel Gopal (Ajay Devgn) iyo Laxman Prasad Apte (Shreyas Talpade) halka Madhav (Arshad Warsi), Lucky (Tusshar Kapoor) iyo Laxman Sharma (Kunal Kemmu) ay meel ku wada nool yihiin isna fahansan yihiin.
5-taan nolosha ku xifaaltamaan iyo shaqooyinka kala duwan waxay ku midoobayaan inay booqdaan xaruntii agoomada ay kusoo bar baareen madaama ninkii soo koriyay Jamnadas (Uday Tikekar) uu geeriyooday si ay tacsidiisa kaga qayb qaataan.
5-tii dhibka badneyd marka ay goobta tacsida tagaan waxay ku dagayaan korneel Chouhan (Sachin Khedekar) gurigiisa kaasi oo ka agdhow aqalka ay dagan tahay Anna (Tabu) waa qof awood badan oo ruuxaanta dadka geeriyooday la hadasho.
Gopal (Ajay Devgn) waa nin fudud wuxuu jeclaanaa gabadhii yaraantiisa xarunta agoomanka kula noolaan jirtay Damini (Parineeti Chopra) oo iyadana goobta ku sugan.
Sheekada waxaa sii qasaayo ninka dhismayaasha qaabilsan Vasu Reddy (Prakash Raj) oo isagana goobta tacsida ka sheeganayo in dhulka agoomanka lagu koriyo uu ku wareejiyay marxuum Jamnadas (Uday Tikekar) sidoo kalena wuxuu sheegaa inuu caruurta Bengalure geenayo meel kale oo lagu xanaaneeyo balse dhismaha isaga u baahan yahay.
Gopal (Ajay Devgn) waa nin ka cabsado reer aaqiraadka wuxuuna riyo marwalbo ku arkaa ninkii soo koriyay Jamnadas (Uday Tikekar) gabadhiisa Ashwini Kalsekar oo horey u geeriyootay.
Gopal iyo saaxiibadiisa dhibaatada wey ku badanee waxayna go’aan ku gaarayaan inay garab weydiistaan Anna (Tabu) si ruuxaanta reer aaqiraad ah xal loogu helo laakiin sheekada wajiyo kale ayay sii yeelanee cabsidana wey sii badanee?
Golmaal Again Fariintiisa Maxaa Laga Yiri: Director Rohit Shetty amaan weyn ayuu mudan yahay ku dhawaad 20-door oo kala duwan ayuu filimkaan isugu keenay hadana qof muuqaal saameyn leh iyo shactiro la wada dareemi karo ayuu seeyay.
Wey adag tahay in filim sameeye uu fariintiisa jiheen karo hadii dadka ay filimka ka bataan laakiin Rohit Shetty xeerkiisa shactirada kama uusan bixin markaana jah wareer iyo cabsi ayuu Golmaal Again kusoo kordhiyay.
Halka saac iyo barka hore waa shactiro iyo iska daba wareeg halka qaybta dambe cabsi loo badiyay dhamaana jiheynta filimkaan qof walbo oo ku lug leh amaan weyn ayuu mudan yahay.
Bandhiga Jilaayaasha: Ajay Devgn doorkiisa Gopal waa furaha taxanaha Golmaal markaana waxaad daawan doontaa Gopal oo mar careesan, marna cabsanaayo marna kaa qoslinaayo mararka qaarna jaceyl iyo dareen murugo leh sameenayo.
Parineeti Chopra door muhiim ah ayay filimkaan iyo sheekadiisa ku leedahay sidoo kalena waxyaabo badan oo naga qarsoon ayaa doorkeeda la xariiro oo kaliya marka la daawado la fahmi karo. balse awoodihii Kareena Kapoor taxanaha Golmaal ku laheyd ayaa meesha ka maqan madaama Pari doorkeeda awood badneyn.
Arshad Warsi marnaba kuma niyad jebinaayo markaana Golmaal Again door kalena oo weyn ayaa laga siiyay sidoo kale Tusshar Kapoor iyo doorkiisa dhagoolka waa sidii aad ku taqaaneyn oo xiisaha badnaa.
Shreyas Talpade isagana saameyntiisa ayuu la yimid weliba muuqaalo badan ayuu si heer sare ah u shactireenayaa balse Kunal Kemmu waa la hareeyay oo doorarka kale ayaa sameyn badan wuuna diiday inuu is dhiibo isagana markiisa ayaad u sacabo tumi doontaa muuqaaladiisa qaar.
Neil Nitin Mukesh doorkiisa xumaanta waa mid heer sare ah halka Prakash Raj iyo doorkiisa tuugada u nacableeyo waa mid xiiso badan weliba duqa dhinaciisa ayuu ku tuuranaa hadalo shactiro badan.
Johny Lever iyo Sanjay Mishra ayaa la siiyay shactirada ugu badan Golmaal Again labadaan ruug cadaa waxay ku amaanan yihiin inay taxanahaan wixii looga bartay ka badan kusoo bandhigeen dhanka shactireynta.
Gunaanad: Golmaal Again amaan wuu ka dhan yahay hadii aad xiiso u qabtay shactiro dhameestiran oo cabsi lifaaqay waa hubaal mashruucaan waad ku raaxeesan doonaa.
Kooxda Golmaal Again qof walbo oo shaashada soo galaayo micno ayuu sameenayaa haba ugu horeeyo Super Star Ajay Devgn sidaa darteed Boxoffice-ka feestadan Diwali Golmaal Again si aan caadi ahayn ayuu u gil gili doonaa maal maha nagu soo fool leh.
Dadka filimada ka faaloodaan waxay Golmaal Again siiyeen sedex xidig iyo bar (3.5/5) taasi oo lagu siiyay inuu yahay filim mada daalo dhameestiran leh. Golmaal waa guuleestay Devgana wuu soo rogaal celiyay!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska Golmaal Again:
Waxaa Aqrisay 1,739
3 Responses to Sheekada filimka Golmaal Again: Mada daalo kasto oo aad maanka ku heesay kama weyn doontid!
sxb zakaria waanku salaamayaa
Great grand masti Super hit ma ahan . ee waa disaster Ama flop . Mahadsanid
Waa runtaa Grand Masti ayaan ka rabay ee ma ahan Great Grand Masti kaasi Disaster ayuu noqday.
Fadlan nala wadaaga sheekada filimka telugu manahabhavudu hori ayaa u balan qadeen iyo taariikhda suny deol madaama shalay dhalashadiisa aheyd Thnkz dhamaan